Wararkii ugu dambeeyay xaaladda seddaxdii qof ee dhawaan lagu xiray magaalada Nairobi – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay xaaladda seddaxdii qof ee dhawaan lagu xiray magaalada Nairobi
Wararka haatan naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa sheegaya in gebi-ahaan lasii daayay seddaxdii qof ee dhawaan ay ciidanka nabad-sugidda iyo kuwa la-dagaalanka argagixisadda kasoo qabteen guri ku yaala xaafadda Gigiri ee magaalada Nairobi.
Seddaxdaan qof ee lasii daayay ayaa la sheegay kala ahaayeen muwaadin u dhashay dalka Britain oo lagu magacaabo Tom James, Yaasmiin Sheekh oo iyada asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya balse haysata dhalashada dalka Denmark iyo sidoo kale Zamzam Xuseen oo iyadane Soomaali Kenyaan ah.
Dhamaan seddaxdaasi qof ayaa la sheegay in xarigooda uu ka dambeeyay kadib markii looga shakiyay inay dad Keenyaan ah tababaro iyo diiwaan gelin u sameynayeen, si ay Al-shabaab ugu biiraan.
Dhinaca kale, ciidanka booliska ee dalka Kenya ayaa la sheegayaa in mobeyladda iyo laptop-yadda ay wateen seddaxdaasi qof ay ka reebteen, si ciidanka dambi-baarista ee dalkaasi ay ugu sameeeyaan baaritaano kale oo dheeraad ah.
Si kastaba ha ahatee, maalintii shalay ayay ahayd markii dowladda Britain ay dowladda Kenya ka codsatay inay jawaab deg deg ah kasoo bixiso sababaha loo xiray muwaadinka Britishka, Tom James iyo gabdho ay saaxiibo yihiin oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Soomaaliya.